> Resource > Lugood > sahlan jidka si ay u gudbiyaan Music ka classic iPod in Lugood
Computer Old dhintay. Hal cusub. Sidee baan ku awoodi karaa inuu wareejiyo dhammaan faylasha music on my classic iPod in Lugood on computer cusub?
Ka helay PC cusub oo hadda raba inay ka classic music iPod wareejiyo si Lugood in la dhiso maktabad Lugood aad? Iyada oo heesaha oo dhan aad classic iPod, haddii aad isku daydo in ay hagaagsan oo Lugood, Lugood saari doonaa wax walba oo ku saabsan classic iPod.
Noocan oo kale ah isagoo kiiska, in aad nuqulka music ka classic iPod in Lugood, waxaad isku daydaa inaad wax kale. Halkan waxaan ku tusi doonaa hab fudud oo waxtar leh inay idinka caawiyaan. Wixii aad u baahan tahay in la soo bixi iPod awood leh in ay kala iibsiga Lugood - TunesGo Wondershare ama TunesGo Wondershare (Mac) .. Iyada oo ay caawimo, waxa kaliya fud inuu u dhaqaaqo heeso iyo playlists aad classic iPod maktabadda Lugood aad kombuutarka. In addtion, iPod in Lugood kala iibsiga ayaa sidoo kale awood aad ku wareejiso iPod classic music si aad u computer .
Music ka iPod classic in Lugood dhaqaaq
Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud ku saabsan u dhaqaaqista heeso ka classic iPod maktabadda Lugood aad kombuutarka. Hadda, ina keen iyaga dhex.
First of dhan, dejisan iyo rakibi barnaamijkan on your PC. Waxa maamula. Haddii aadan ku rakiban Lugood on your computer, barnaamijkan ku siin doonaa suuqa kala rakibo Lugood. Noocan oo kale ah isagoo kiiska, waa in aad la rakibi Lugood on your computer. Ka dib markii in, isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan aad classic iPod aad PC. Marka ay ku xiran tahay, barnaamijkan lagu ogaan doonaa classic iPod dhakhso, ka dibna u soo bandhigaan on interface ugu weyn. On geedka buugga bidix, aad awoodo si aad u eegto ku jira oo dhan ee aad classic iPod.
Tallaabada 2. dhoofinta music ka iPod classic in Lugood
Markaas, inay u dhoofiyaan music dib ugu maktabadda Lugood waqti, waxaad riixi kartaa batoonka hore - "Music Copy in Lugood" at line hoose ee interface ugu weyn. furmo in booda, guji "Start". Tan iyo dhammaan faylasha warbaahinta ayaa la hubinayaa, waa in aad uncheck faylasha kale warbaahinta laga reebo music. Markaas, barnaamijkan kaa caawin doona inaad dhoofin songs, kuwaas oo maktabadda Lugood.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo si buuxda u la jaan qaada iPod classic 3, iPod classic 2 iyo classic iPod.
Dabcan, aad awood u syncing music ka classic iPods in Lugood aan sidaa yeelno. Guji "Media", tab ku saabsan geedka buugga bidix. Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala warbaahinta ee guddiga midig. Markaas, guji "Music". Daaqadda maamulka music, heeso la xusho oo aad go'aansato in aad sii qulquli maktabadda Lugood. Markaas riix "Smart dhoofinta in Lugood". Sidoo kale, badhanka waxa aad siidaysay ka hoorto gabayadii mid ah in lagu wareejiyo maktabadda Lugood hor. Ama waxaad sidoo kale u gudi karo hawsha adigoo gujinaya saddexagalka rogay "Dhoofinta in ay" ka dibna "Dhoofinta in Lugood Library".
Sameeyey! Music aad hore u huleeshay ka iPod classic in Lugood. Haddii aad rabto in lagu wareejiyo playlists oo dhan, doortaan "playlist" tab on geedka buugga bidix. Markaas ka heli playlists aad la doonayo oo guji "Dhoofinta in" button.